Vaovao - Inona avy ireo fizotry ny vokatra aluminium avy amin'ny akora ka hatramin'ny fanodinana sy famolavolana?
Ny famolahana mazava tsara ny aliminioma dia azo atao vokatra vita amin'ny aliminioma. Na dia samy hafa aza ny mizana sy ny endriny, ny habeny marina, ny fisehoany tsara tarehy ary ny fahombiazan'ny milamina dia mety hahasoa ny olona sy ny vahoaka ary hanangana loko hafa amin'ny fiainana. Amin'ny fiainantsika dia misy foana ny orinasa mpamokatra vokatra aluminium, toy ny takelaka aluminium, fantsom-boaloboka, firafitra aluminium, akorandriaka sns, izay mandrakotra ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika. Izy rehetra dia vita amin'ny alimina amin'ny alàlan'ny fanodinana mazava tsara, ny akora voafantina voafantina dia mitovy, fa ny sehatry ny fampiharana farany sy ny anjara asany kosa dia samy hafa, mamorona vokatra aluminium isan-karazany, ary io dia vita amin'ny vokatra vita amin'ny aliminioma voafaritra amin'ny fizotran'ny fikirakirana.
Ny fikorianan'ny vokatra vita amin'ny aliminioma dia mamaritra ny andraikitra tokony hataony na ny andraikitra tokony hataony aorian'ny famolavolana azy. Noho izany, ny fanodinana ireo vokatra vita amin'ny aliminioma dia zava-dehibe indrindra. Andao hojerentsika ireo vokatra vita amin'ny aliminioma manomboka amin'ny akora ka hatramin'ny famolavolana. Fomba efa niainana.
1. Mamono bobongolo
Ny karazana vokatra vita amin'ny aliminioma dia manana takiana habe manokana, ary tsy maintsy ho marina sy be pitsiny izy io mba ho mora ampiasaina. Izany dia mitaky ny mpamokatra fanodinana vokatra vita amin'ny aliminioma mba hanana teknolojia mamolavola maty manaparitaka sy fahaiza-manao fanokafana bobongolo hahatratra ny famokarana betsaka sy ny famokarana voadio. Ny famolahana maty dia ny fanafana ny alimina amin'ny maripana iray, ary aorian'ny miempo ny firaka aliminioma dia atsofoka ao anaty lasitra izy, ary avy eo azo esorina amin'ny bobongolo aorian'ny fampangatsiahana sy fananganana endrika vokatra aluminium misy endrika sarotra. ary refy marina.
Rehefa vita ny vokatra vita amin'ny aliminioma dia hanana fahamendrehana, tsy fitoviana, rakotra, burrs, poti, sns, ny vokatra vita amin'ny aliminioma, ka ny vokatra vita amin'ny aliminioma dia mila nohosorana rehefa vita. Voalamina ny faritra. Ny fomba mahazatra amin'ny poloney dia misy ny famolahana mekanika, ny famolahana simika ary ny famolahana electrolytic. Ireo vokatra vita amin'ny aliminioma voahosotra dia tsy misy lesoka, malama, malama ary madio, toy ny fitaratra ihany.
Ny vokatra vita amin'ny aliminioma dia miavaka amin'ny seramika, hazo, plastika ary fitaovana hafa, tsy amin'ny lafiny hamafin'ny metaly ihany, fa amin'ny endriny vy tsy manam-paharoa amin'ireo vokatra vita amin'ny aliminioma ihany. Ny vokatra aluminium dia azo ankafizina amin'ny fiainana, ary tena ilaina ny firafitra vy. Ny hakanton'ny rivo-piainana milamina entin'ny olona, ​​ary ny fizotran'ny sary dia matetika ampiasaina hanatsarana ny hatsaran'ny vy amin'ny vokatra vita amin'ny aliminioma amin'ny fizotrany sy ny famolavolana vokatra aluminium.
Ny fanaovana tariby sy ny fandefasana tariby dia fitsaboana voadio eo ambonin'ny vokatra vita amin'ny aliminioma mba hanatsarana ny hatsarana, fa ny maha samy hafa ny fanaovana sary an-tariby sy ny fandefasana azy dia ny mamorona tsipika vaovao amin'ny metaly, manova ny lesoka eo amin'ny tampon-tany voalohany na mampiasa andalana samihafa . Tsipika mahazatra sy somary mitovy fanatsarana ny firafitry ny metaly sy ny hatsaran'ny vokatra aluminium.
Ny zavatra mampiahiahy indrindra amin'ny vokatra aliminioma amin'ny fiainana andavanandro dia ny okididra sy ny harafesiny. Raha vantany vao harafesina izy ireo, dia tsy hianjady amin'ny estetika fotsiny noho ny harafesina, fa ireo faritra voahitsaka koa ho lasa marefo ary hisy fiantraikany amin'ny fitoniana ankapobeny. Ilaina eto ny Anodizing. Process. Ny Anodizing dia fizotran'ny fitsaboana ambonin'ny tany izay tsy afaka manatsara ny fisehoan'ny vokatra aliminioma ihany, fa koa ny fanoherana ny harafesiny sy ny fanoherana ny fitafy. Amin'ny alàlan'ny fametrahana ireo fitaovana aliminioma ao amin'ny electrolyte mifanaraka aminy sy ny fizotran'ny fizotrany manokana, dia misy onja elektrika apetraka amin'ny tampon'ny vokatra aliminioma. Ireo mpanamboatra fanodinana vokatra aluminium dia afaka manatsara ny velaran'ny vokatra aliminioma ho loko isan-karazany mandritra ny fizotran'ny fanaingoana, ka ny vokatra aluminium dia manana torolàlana bebe kokoa amin'ny endrika ivelany, ary miaraka amin'izay koa, matevina ny sosona oksida ary tsy mora milatsaka, miantoka ny ny kalitaon'ny vokatra vita amin'ny aliminioma dia maharitra sy mateza.
Ireo vokatra aliminioma nifandraisantsika tamin'ny fiainantsika isan'andro dia tsy vitan'ny hoe matanjaka sy mateza ihany, fa koa tsara tarehy sy tsara tarehy. Mba hahatratrarana vokatra toy izany dia tsy afa-misaraka amin'ny fizotran'ny fanodinana sy ny famolavolana nofehezin'ny mpanamboatra azy. Mazava ho azy fa tsy ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo, ny mpanamboatra dia tsy maintsy mieritreritra Mba hamokarana karazana vokatra aluminium, ny safidy teknolojia dia tsy maintsy dinihina ihany koa. Na izany aza, dia mitovy foana izy io. Ny fandefasana am-pitandremana sy ny fikatsahana ny kalitao no fotokevitra tsy maintsy tohanan'ny mpanamboatra amin'ny famokarana vokatra aluminium.